VIDEO: Dowladda Somalia oo Beled-xaawo ku soo bandhigtay ciidankii jebiyey wasiir Janan & hanjabaad loo diray Kenya.
January 30, 2021 Xuseen 1
Puntlandtimes (Beled-xaawo)-Dowladda federalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta duleedka magaalada Beled-xaawo ee gobolka Gedo ku soo bandhigtay boqolaal katirsan ciidanka dowladda Soomaaliya oo dhowaan magaaladaasi kula dagaalamay ciidamada wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan.
Taliyayaasha cidamada Gorgor iyo kuwa lugta Soomaaliya oo ay weheliyaan shaqsiyaad xilal ka haya dowladda Soomaaliya kana soo jeeda gobolka Gedo ayaa warbaahinta u soo bandhigay ciidamadaan oo la sheegay inay cagta mariyeen cadawgii laga soo abaabuley gudaha Kenya.
Mas’uuliyiinta oo la hadlay ciidanka ayaa ku ammaanay qaabkii ay uga hortageen dagaalkii kaga yimid ciidamada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, waxaana ay sheegeen in ciidanku ay diyaar u yihiin difaaca gudaha iyo dibadda Soomaaliya.
Taliyaha ciidamada warkiisii ayaa hal arrini iga raacday. Taliyuhu hadal muhiim ah buu jeediyey haddii uu yiri ciidamadu salaadaha ha oogaan haddii ay rabaan in ay guulaystaan, waa hadal xaqiiq ah laakiin waxaa habboonayd in uu ku daro, shakhsigii MUKHAADARAAD isticmaala ciidanka waa laga saarayaa. Aabaha & hooyada mukhaadaraadkuna waa QAADKA/JAADKA, wayna yartahay askari ama sarkaal aan qaadka cunin. Sidee marka uu qof qaad cunay uu salaad iyo sharaf u ilaalin kara?
Waxa aan marka ku talin lahaa in mukhaadaraadka qaadka laga yeesho siyaasad cad. Waa in ciidamada, shaqaalaha rayidka ah & dhammaan madaxda dawladdu aysan DAROOGIISTAYAAL noqon oo aysan isticmaalin noocyada kala duwan ee mukhaadaraadka oo uu ugu horreeyo QAADKU. Waa in, hadduuba jiro, xeerka maandooriyaha lagu daraa mukhaadaraadka QAADKA.
Haddii uusan sharci maandooriye jirinna, waa in xeer laga yeeshaa. Inta ka horraysana, waa in lagu soo daraa shuruudaha ciidan qorista & shaqo qorista. Waa in sidoo kale shuruud laga dhigaa siyaasiyiinta xildoonka ah ee leh madaxweyne, wasiirro, xildhibaanno, garsoorayaal & cidkale oo kasta oo u tartamaysa ama raadinaysa in ay waddanka xil sare ka qabato; DAROOGIISTE masuuliyad ma qaadi karo.
Qaadku waa uu ka saamayn xun yahay maandooriyayaasha kale, waayo waxa aad ka caajisaysaa cibaadadii, waxbarashadii, shaqadii & wax kasta oo horumar ah. Marka, waxa aan taliyaha u sheegayaa in qof QAAD cuna uusan salaad shuqul ku lahayn, oo aan lagu aamini karin masiir ummadeed. Marka, qaadka siyaasad iyo xeer hallaga yeesho; haddii kale, MOORYAAN iimaan la’ baad kulligiin tihiin. Dad u badan muqayiliin baad ku leedahay tukada salaadaha, sidee bay ku dhici kartaa, jaalle taliye?
Dhinaca kale, dhibaatada jirtaa waxa weeyaan, madaxweyne kasta & xildhibaan kasta waxa uu isku dayaa in uu xoogga saaro sidii uu usii xejisan lahaa jagadii uu iibsaday. Taasi hadaba si ay ugu suurtagasho, madaxweyne kusheeg kastaa waxa uu marka horeba LAALUUSHAA baarlamaan ku sheeg kasta, iyaga ayuu xukuumadda ka soo doortaa si aan looga hor imaan, garsookana xukuumadda ayuu hoos geeyaa. Taasi marka waxa ay sababtaa in aan waddanku horayba u socon, illeen waa waddan la wada DABRAYE.
Tani marka waa waxa maanta & shalay & doraad & weligeenba na haystay. Sidee looga gudbi karaa? Waxaa looga gudbi karaa qodobadan soo socda:
1.in la yeesho dastuur iyo xeerar wax ku ool ah.
2. In baarlamaanka iyo xukuumadda aan isku hal qof laga dhigin ee la kala saaro oo xeer laga yeesho.
3. In garsoorka la tayeeyo oo hawlihiisa loo madax banneeyo.
4. In hantida madaxda & qoysaskooda la caddeeyo inta ayna xilka qaban iyo marka ay xilka ka degaan oo xeer laga yeesho.
5. In madaxdu aysan isku haysan karin laba jinsiyadood oo xeer laga yeesho
6. In shaqaalaha rayidka ah, madaxda waddanka & ciidamadu ay mamnuuc ka tahay in ay isticmaalaan nooc kasta oo MAANDOORIYA ah, oo uu ugu horreeyo qaadku, oo xeerna laga yeesho.
Waddanku marka oo ka soo kabanayo dagaallo sokeeye waxaa luma is aamminaaddii, sidaa daraadeed, waxaa muhiim ah in la helo nidaam la isku waafaqsanyahay oo kalsoonidii luntay soo celin kara, taasina kuma imanayso qaabka aynu maanta & shalayba u dhaqmaynay. Waxa kaliya oo ay u danaynaysaa kooxo MAAFIYA ah oo waddanka afduub ku qabsada oo xirriiro la samaysta maafiyo caalamiya, waana waxa maanta Soomaalida haysta.
Sidaa daraaddeed, shacabka Soomaaliyeed ee dulmani taageerayaal uma noqon karno MAAFIYO isbaacsanaysa, oo isku soo bahaystay iskuna baacsanaysa in ay iyqaga dhiig miirtaan.
Gunaanadkii, waxaa shicibka looga baahanyahay in ay baraarugaan, oo ay iska daayaan kala taageeridda ay kala taageerayaan kooxo maafiya ah oo u badan qurba joog oo aan dantooda iyo dan waddanba wadin. Isbeddelku shacabka ayuu ka yimaaddaa, oo dhalinyarada ayaana hormuud u ah. Waddankani isbeddel maamul buu u baahanyahay, oo dib u xorayn buu u baahanyahay ee fadhiga hallaga kaco; waddanku uma afduubnaan karo 10 qofood oo qawlaysato ah.